Akụkọ - typesdị ụdị ọkụ a na-ahụkarị maka iji ihe nrụpụta kọmputa
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmatakwu banyere microswitches, ị nọ na ibe aka nri. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya na ụdị micro switches dị iche iche. Nke a ga - enyere gị aka ịhọrọ ngalaba kwesịrị ekwesị iji gboo mkpa gị. Isiokwu a ga-enye gị nghọta miri emi banyere ụdị 6 nke ngwaọrụ ndị a. Ka anyị lelee ha otu otu. Gụọ na ịchọta ihe ndị ọzọ.
Edepụtara n'okpuru bụ ụdị isii nke ngalaba ndị a. Ọ bụ ezie na ihe ndị a niile nwere ụdị ọrụ ha ga-arụ, ọdịiche dị n’etiti atụmatụ ha. Ndị a bụ ndị dị iche iche na-eme ka ha dị iche na ibe ha.
2. Push Button Gbanye
4. Rotary Gbanye
5. Slide switches
Micro switches bụ obere ngbanwe nke na-egosipụta bọtịnụ ma ọ bụ bọtịnụ push. Akụkụ ndị a anaghị achọ mgbalị siri ike iji rụọ ọrụ nke ọma. Ebe ọ bụ na ndị a dị obere, a haziri ha maka itinye obere ọrụ nke obere ọrụ.
2) Push Button ụdị
Enwere ike ịchọta ngalaba ndị a n'ọtụtụ ụdị na ụdị. Ewezuga nke a, a na-eji ụdị ihe dị iche iche eme ha. Mgbe ị na-agbanye bọtịnụ ahụ, ọ ga-emepe ma ọ bụ mechie sekit. Nwere ike ịhọrọ ma ọ bụ obere oge ma ọ bụ ụdị mkpọchi. Ngbanwe oge nke a ga-agbanye ma ọ bụ gbanyụọ ma ọ bụrụhaala na ịpịghị ọzọ.
3) rocker ụdị
Mgbe ị pịa ụdị mgba ọkụ a, ọ ga-ama jijiji na bọtịnụ ngwaọrụ iji mechie kọntaktị ahụ. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ị gbanye mgba ọkụ na n'akụkụ nke ọzọ, ọ ga-emepe sekit ahụ. Ọzọ, ngwaọrụ ndị a dị n'ụdị na ụdị dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịnweta ya na nhazi abụọ: osisi abụọ ma ọ bụ otu osisi.
4) Rotary ụdị
Dị ka aha ahụ na-egosi, ụdị ụlọ a gụnyere kọntaktị na-akpụ akpụ. Nwere ike iji anya nke uche hụ ihe ịpị ahụ gaa na osi ite iji nweta nghọta ka mma banyere otu ngbanwe ndị a si arụ ọrụ.
5) slide ụdị
Mgba ọkụ slide gosipụtara obere akpịrị. Ọ bụrụ na ịchọrọ imeghe ma ọ bụ mechie sekit ahụ n'ime ngwaọrụ ahụ, ịkwesịrị ịgbanye isi ya. Ebe ọ bụ na ha bụ kọmpụta kọmpat, enwere ike ịhọrọ nke ọma maka obere sekit nke ọrụ, ọkachasị ebe ịchọrọ mgbanwe. Dịka ọmụmaatụ, a na-ejikarị ngwaọrụ ndị a eme ihe n'ụzọ ụgbọ okporo ígwè ịgbanwe ụzọ maka ụgbọ oloko na-abata.
Post oge: Sep-05-2020
Push Button Micro Gbanye, Electric Toggle Gbanye, Toggle Gbanye, Push Button Footswitch, Micro Push Button Micro Gbanye No Nc ọnụ, Toggle Gbanye buut,